Infinity Ops - 2Game
▪ Author: Azur Interactive Games Limited
▪ Publish date: 08/05/2018
▪ Latest version: 1.1.5
တစ်သိပ္ပံဝတ္ထု setting ကိုတစ်ဦး multiplayer FPS!
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကန့်သတ်သာလွန်လျက်ရှိသည်နှင့်ကမ္ဘာ interplanetary စစ်ဆင်ရေး၏ပရမ်းပတာသို့ဆင်းသက်တော်မူသောအခါဂိမ်း, အဝေးလံသောအနာဂတ်ကာလ၌နေရာတစ်နေရာယူနိုင်အောင်ဖြစ်ရပ်!
Player ကိုဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း, ကျြသမား, Tank နှင့် Assault တူသောအတန်းအဖြစ်အသင်း PvP တိုက်ခိုက်ရေးရင်ဆိုင်ရမည်! အဆိုပါအတန်းတစ်ခုချင်းစီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် features တွေနဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်နွယ်စု ဖန်တီး. အခြားအသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ခေါ်ရန်နှင့်အတူတကွဂိမ်းထဲမှာအချိန်ဖြုန်း!
လက်နက်များတစ်ဦးကကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးချေမှုန်းရေးနှင့်ပလာစမာရိုင်ဖယ်ကနေလေဆာ machineguns နှင့်လက်ပစ်ဗုံး launchers ရန်, In-ဂိမ်းရရှိနိုင်ပါသည်များမှာ! တစ်ခုချင်းစီကိုလက်နက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိနှင့်အင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်။
တစ်လောကလုံးဆွဲငင်အားမြန်နှုန်း running ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်စဉ်အနိမျ့ဆွဲငင်အား, ဝေးနှင့်မြင့်မားသောခုန်ကစားသမားလွှတ်ပေးခြင်း!
❖ Fantastic 3D ဂရပ်ဖစ်
Excellent က, အသေးစိတ် 3D ဇာတ်ကောင်များနှင့်မြေပုံမော်ဒယ်လ်။
❖အားနည်း device များအတွက် Optimization
ဂိမ်းအနိမ့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ device များအတွက် optimized ဖြစ်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောဖုန်းများအဘို့အဂရပ်ဖစ်၏ရွေးချယ်မှုကို!
အလိုလိုထိန်းချုပ်ပြီးလွယ်ကူ interface ကိုသင်ယူမှုကွေးကျွမ်းကျင်ဖို့ရုန်းကန်သင်စွန့်ခွာမည်မဟုတ်,
ဂိမ်း modes သာ
အခမဲ့ mode ကို။ သငျသညျကိုယျအဘို့စစ်တိုက်ခြင်း။ ယင်းပတ်ပတ်လည်ကိုအနိုင်ပေးရဲ့အဆုံးမှာအမြင့်ဆုံးရမှတ်နှင့်အတူကစားသမား;
သင့်ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူဂိမ်းကိုဖန်တီးပါ။ သင့်ရဲ့ထုံးစံဂိမ်းလော်ဘီလုပ်ဖို့သင်၏မိတ်ဆွေများ Invite နှင့်အတူတကွတိုက်ဖျက်!
ပိုများသော features တွေ
အားနည်းဖုန်းများအတွက်☢☢☢ခမ်းနား Graphics နဲ့အကောင်းမြင်! ☢☢☢
သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ, လက်နက်တွေ upgrade, အချိန်, လက်နက်နှင့်လှုပ်ရှားမှုပြန်တင်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဇာတ်ကောင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စရိုက်လက္ခဏာရှိပါတယ်။ မိုင်း, လက်ပစ်ဗုံး, medkits နှင့်ထိတ်လန့်-ဓါးသွား: ကဲ့သို့သောအပိုဆောင်းပစ္စည်းတွေဝယ်။
အခမဲ့လက်ဆောင် Quest များနှင့်အခမဲ့ပစ္စည်းပစ္စယများ၏တန်ချိန်လက်ခံရရှိရန်နေ့စဉ်ဂိမ်း Enter!
သင့်ရဲ့နေ့စဉ် Quest များသလားနှင့်သင့်ကိရိယာများတိုးတက်စေ!
ချစ်ခင်ရပါသောသုံးစွဲသူများဂိမ်းဟာ Post-ဖှံ့ဖွိုးတိုးအဆင့်၌ရှိသေး၏။ မည်သည့် bug တွေနှင့်အမှားများကိုသငျသညျကိုတွေ့ကြုံခံစားအဖြစ်သင်ထောက်ခံမှုအသင်းမှတဆင့်ရှိတယ်ဆိုတောင်းဆိုမှုများနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုမျှဝေပါ။
Android အတွက် Infinity Ops အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ Infinity Ops apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, Infinity Ops iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် Infinity Ops ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ Infinity Ops ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် Infinity Ops ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!
Read more: Infinity Ops